Shiinaha Labo-shey oo kuleylinta kuleylka kuleylka ah oo leh warshad lakabka waraaqaha iyo alaab-qeybiyeyaasha. 名 / 公司 名
Wax ceyriin ah: Waxyaalaha Taakuleynta + Wax + Lakabka Waraaqda + Aluminium Aluminium + Filimka Caaga ah + Filimka daboolka
Ku daabac qaababka ama calaamadaha ganacsiga lakabka warqadda gudaha ah
1- Wax soosaarka Matoorka, Mashiinka, iyo Saliidaha
2- Wax soo saarka Saliida la cuni karo
3- Wax soo saarka dawada (warshadaha dawooyinka ee looxa, jel, kareemka, budada, dareerayaasha, iwm.)
4- Alaabada Cuntada.
5- Cabitaanada, Casiirka Khudradda, Subagga, Malabka, Biyaha Macdanta ah
6- Cayayaanka, Bacriminta, iyo Kiimikooyinka
• Cunnooyinka kiimikada
• Wax soo saarka Nafaqada
• Cuntooyinka & Cabitaannada
• Qurxinta, iwm.
Heerkulka dareeraha: heerkulku wuxuu saameyn ku yeeshaa dareeraha dareeraha, sidaas darteed wuxuu saameeyaa waxqabadka xiritaanka. Kordhinta heerkulka, u nuglaanshaha dareeraha ayaa hoos u dhaca isla markaana gaaska gaaska ayaa kordha. Dhinaca kale, isbeddelka heerkulku wuxuu badanaa u horseedaa qallooc ku yimaadda qaybaha wax lagu xidho oo ay fududahay inuu baxsado.
Hore: Laba-shey kuleylka kuleylka kuleylka shey oo leh "Qaab dhismeed"
Xiga: Khatimidii xabagta